Golaha Wakiilada K/Galbeed oo cod aqlabiyed leh ku meel mariyay Golaha Wasiirada | Somali National Television - sntv.so
Home KOONFUR GALBEED Golaha Wakiilada K/Galbeed oo cod aqlabiyed leh ku meel mariyay Golaha Wasiirada
Golaha Wakiilada K/Galbeed oo cod aqlabiyed leh ku meel mariyay Golaha Wasiirada
Baydhabo(SNTV) Kalfadhigii 7-aad kulankiisi 2-aad oo ay isugu yimaadaan Golaha wakiilada Dowlada Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ajandihiisu ahaa codka kalsooni siinta Golaha Wasiirada uu dhawaan soo dhisay madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed C/Casiis Xasan Maxamed (Laftagareen) ayaa kulankaasi oo uu shir guddoominayay guddoomioyaha Baarlamaanka kaga codsaday xildhibaanada in ay codka kalsoonida siyaan wasiirada uu dhawaan magacaabay,si loo dardargeliyo howlaha horyaala.
Intaasi kadib ayaa la gudaha galay ajandaha,waxaana soo xaadirtay 124 xubnood oo xildhibaano ah,kuwaasi oo cod aqlabiyed leh ku meelmariyay Golaha wasiirada Koonfur Galbeed,123 ayaana ogolaatay.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowlada Goboleedka Koonfur Galbeed mudane C/qaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa ku dhawaaqay natiijada,isagoo xusay in ay ansax yihiin xubnaha Golaha wasiirada Koonfur Galbeed,ayna gudan karaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday.
Ugu dambeyntii madaxweynaah Koonfur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed (Laftagareen) ayaa uga mahadceliyay golaha baarlamanka sida ay kalsoonida u siiyeen golihiisa wasiirada.
Isla goobtaasi ayaa lagu dhaariyay wasiirada,waxaana lagula dardaarmay in ay si hufan u gutaan waajibaadka horyaala.
Previous articleShirka Madasha Wadajir oo Maalinkii Labaad galay
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo u hambalyeeyey Madaxweynaha dib loo doortay ee Nigeria